Taliyihii Hore ee Ciidanka Wayaanaha oo Kadigay Xaalka Wadanka itoobiya | Allbanaadir News
Taliyihii Hore ee Ciidanka Wayaanaha oo Kadigay Xaalka Wadanka itoobiya
Feb 12, 2018 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya wadanka gumausiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay mar kale saraakiil caan ah oo wadanka xilal kasoo qabtay kubaaqeen in kooxda talada wadanka kufashilantay ee EPRDF/TPLF xilka iska wareejiyaan si wadanka xal loogu helo.
Taliyihii hore ee ciidamada wayaanaha Tsadkan Gebretensae, Ayaa sheegay in uu kutalinayo in kooxda TPLF ay dadka hor dhaafto isagoo sheegay in talada wadanka lagu wareejiyo dad dhex dhexaad ah oo kakooban qoomiyadaha kala duwan ee wadanka daga wadanka.
Sargaalkan mar ugu sarayn jiray ciidanka wayaanaha ayaa sheegay in wadanku uu ubaahan yahay maskax dagan iyo waliba aqli saliim ah si loo badbaadiyo qaranka burburka qarka usaaran ee kacdoonada waawayn ay mudada dheer kajiraan.
Sargaalkan oo udhashay qoomiyada Tigreega ee talada wadanka isasiisay ayaa umuuqda mid ay kadhamaatay rajadii ahayd in ay qoomiyadu sii maamusho wadanka, wuxuuna dhowr jeer kutaliyay in talada wadanka lagu wareejiyo dad lagu kalsoon yahay.
Tsadkan Gebreten sae oo waraysi siiyay wargayska Reporter ayaa sheegay in wadanku uu kujiro xaalad murugsan isla markaana loobaahan yahay in labadbaadiyo, isagoo intaas kudaray in xalku uu yahay TPLF oo xilka iska wareejisa.
Waxaa baryahan soobadanayay saraakiisha iyo dadka miisaanka kuleh siyaasada gumaysiga Itoobiya, ee sida wayn udhaliilaya sida ay wax usocdaan isla markaana ku talinaya in wax labadalo si wadanka loobadbaadiyo.